एनिमेट सबै: तपाईंको आईफोनमा एनिमेटेड पृष्ठभूमि (साइडिया) | आईफोन समाचार
एनिमेट सबै: तपाईंको आईफोनमा एनिमेटेड पृष्ठभूमि (साइडिया)
अर्को जेलब्रेक क्लासिक जुन आईओएस to मा अपडेट गरिएको छ र जसले प्रणालीको सौन्दर्यलाई परिमार्जन गर्न चाहनेहरूलाई खुशी पार्दछ। एनिमेट सबै तपाईंको उपकरणमा एनिमेटेड पृष्ठभूमि ल्याउँछ। अनुप्रयोगले तपाईंलाई (सिडियाबाट) एनिमेटेड पृष्ठभूमिहरू लक स्क्रिनमा, स्प्रिboardबोर्डमा र सूचना केन्द्रमा स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ। के तपाइँ विन्टरबोर्डको आवश्यक उपकरण अनुकूलित गर्न सोच्नुहुन्छ? त्यहाँ अन्य धेरै विकल्पहरू छन् र यो एक उत्तम हो।
एप्लिकेसन उही उही सर्जकको MPow को हातबाट आउँदछ Miniplayerजुन हामीले अर्को दिनको बारेमा कुरा गर्‍यौं। एक पटक उपकरणमा स्थापना भएपछि, हामीले यसको प्रयोग गर्न साइडियाबाट एनिमेटेड पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। एनिमेटेड पृष्ठभूमि को क्याटलग धेरै व्यापक छ। अनुप्रयोगबाट नै तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न सक्षम हुनुका साथै (सेटि >हरू> एनिमेट सबै> नयाँ एनिमेशनहरू डाउनलोड गर्नुहोस्), हामी सिडिआ पहुँच गर्न सक्दछौं त्यसो गर्नका लागि। यदि तपाईं यसलाई छिटो फेला पार्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं सिधै "सेक्सन> एड्डन्स (बुटलोगो)" मा जान सक्नुहुन्छ। यस सेक्सनमा तपाईले फेला पार्नुहुने लगभग सबै एनिमेसनहरू एनिमेट सबैसँग उपयुक्त हुनेछन्।
एकचोटि तपाईले चाहानु भएको पृष्ठभूमि डाउनलोड गरेपछि, "सेटिंग्स> एनिमेट सबै> एनिमेसन छनौट गर्नुहोस्" मा फिर्ता जानुहोस् र तपाईले चाहानु भएको एउटा छनौट गर्नुहोस्। पछाडि जानुहोस् र खोल्नुहोस् जहाँ तपाईं एनिमेटेड पृष्ठभूमि देखा पर्न चाहनुहुन्छ (लक स्क्रिनको लागि लकस्क्रिन एनिमेसन, स्प्रिboardबोर्डका लागि होम एनिमेसन, र सूचना केन्द्रका लागि अधिसूचना केन्द्र एनिमेसन (आईओएस on मा))। पछिल्लो, तपाईंले परिवर्तनहरूलाई प्रभाव पार्ने क्रममा एक प्रतिक्रिया गर्नुपर्नेछ। तपाईं छविहरूको संख्या वा एनिमेसनको अवधि जस्ता पक्षहरू परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ।
एनिमेट आईएल6र आईओएस with र आईफोन ss सहित सबै आईफोन मोडेलका साथ उपयुक्त छ। आईप्याडको लागि एक संस्करण छ (एनिमेट एचडी) जुन आईओएस for को लागि अझै अनुकूलित गरिएको छैन, र आशा छ यो छिट्टै नै हुनेछ। अरु के छ त, संस्करण २.० जुन छिट्टै रिलीज हुनेछ भिडियोमा तपाईंको आफ्नै एनिमेटेड पृष्ठभूमि सिर्जना गर्न विकल्प समावेश गर्दछ कि तपाईं आफ्नो उपकरण मा छ। एनिमेट सबै बिगबॉस रेपोमा $ १.1,99 मा उपलब्ध छ र एनिमेटेड पृष्ठभूमिहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन्। यो बिना कहिकै जान्छ कि यस प्रकारका अनुप्रयोगहरूले हाम्रो उपकरणहरूको ब्याट्री खपत वृद्धि गर्दछ, यद्यपि यसको विकासकर्ताले आश्वासन दिन्छ कि यो कम छ। अन्तमा, संकेत गर्नुहोस् कि यो अझै आईओएस7मा केहि बगहरू छ, जुन आशा छ कि भविष्यमा अद्यावधिकहरूमा फिक्स हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » एनिमेट सबै: तपाईंको आईफोनमा एनिमेटेड पृष्ठभूमि (साइडिया)
येसन मार्क भन्यो
यसले मलाई यो स्थापना गर्न दिदैन, एउटा नोट यसो भन्छ: नोट अनुरोध गरिएको परिमार्जनहरू लागू गर्न सकिदैन किनकि तिनीहरूलाई निर्भरता चाहिन्छ वा द्वन्दहरू छन् जुन स्वचालित रूपमा मर्मत हुन सकेन। र गुलाबीमा दन्त्यकथा org.chronic-dev.animate देखा पर्छ। तपाईले मलाई दिनु भएको सहयोगका लागि धन्यबाद!
येसन मार्कलाई जवाफ दिनुहोस्
यो २० मिनेटमा ०% ब्याट्रीमा अनुवाद हुन्छ !!!
त्यति धेरै छैन। मैले यो दिनभरि लगाएँ र यो अतिशयोक्ति पनि होइन।
केवल निर्भरता खोज्नुहोस् र स्थापना गर्नुहोस्!
सहयोग मैले यसलाई स्थापित गरें, र यो राम्रो काम भयो, तर समस्या यो हो कि जब मैले धेरै डाउनलोड गरेको थिएँ, एउटामा मैले "एनिमेट" भनि चिह्न डाउनलोड गर्दा मैले रिबूट गरें र अब मेरो स्क्रीन १/1 छ, मैले यसलाई सुरक्षित मोडमा राखें, मैले मेटाएँ यो चिमटा पनि यो नै रहन्छ र उही रहन्छ, कृपया मलाई यसको समाधान गर्न मद्दत गर्न चाहन्छु, कृपया।
सुरक्षित मोडमा सुरू गर्नुहोस् (एप्पल बाहिर नआउञ्जेल पावर र होम बटन होल्ड गर्नुहोस् र त्यसपछि तिनीहरूलाई रिलीज गर्नुहोस् र भोल्युम अप बटन थिच्नुहोस्। त्यसपछि यो सामान्य पुन: शुरू हुन्छ। ट्वीक मेटाउनुहोस् जबसम्म यो समाधान हुँदैन।
तपाईंले कहाँबाट स्थापना गर्नुभयो? सक्कली?
मैले समस्या पहिले नै समाधान गरें र म भन्छु कि यो केहि अनौंठो वा जिज्ञासु थियोः
भोल्युम बटन थिचेर सुरक्षित मोड प्रविष्ट गर्नुहोस्, मैले एनिमेट सबै र एनिमेट स्थापना रद्द गरें, मैले रिबुट गरें किनकी त्यहाँ sbsetrings वा सक्रियकर्तासँग सस्प्रेसनको कुनै मार्ग थिएन किनकि ती "असक्षम" थिए, यो सकृय भयो र यो अझै थियो, मैले के गरे यसलाई सुरक्षित मोडमा फेरि खोल्नको लागि र साइडियामा ट्वीक खोज्न यसलाई सुरक्षित मोडमा राख्नको लागि (जब स्टेटस बार देखिन्छ) मैले रेसिंग गर्न सन्देशलाई पछ्यायो र सबै कुरा सही थियो।
म टिप्पणी गर्दछु कि मेरो आश्चर्यको कारणले महसुस गरें कि फ्याक्ट्री सेफ मोड मोबाइल सबस्टार्ट सुरक्षित मोड जस्ता छैन।
शुरुवात बबलको तलको नाम के हो?
सजीव बबल बुटलो
हरिमा 1087 भन्यो
आईफोन ss को साथ कोही छ जो यसलाई परीक्षण गर्न को लागी ब्याट्री कति लामो रहन्छ भनेर बताउन
Harima1087 लाई जवाफ दिनुहोस्
के यसले धेरै ब्याट्री खपत गर्दछ?
धेरै छैन, यो ध्यान दिएर छ? मलाई त्यस्तै लाग्छ।
हेर्नको लागि केहि छैन !! यसले ब्याट्री खेर फाल्दैन, यो तपाईको स्क्रिनमा केवल दयनीय जीआईएफ मात्र हो, जुन तपाईले पहिले नै तपाईको आईफोनको लागि केस चार्जर किन्नुपर्दछ, किनकि हामी आफैंलाई अपडेट गर्न चाहान्छौं, त्यति नै ब्याट्री खर्च गर्छौं। यो केवल एक विचार हो ताकि तपाईं आफ्नो आईफोन अझ बढी रमाउन सक्नुहुन्छ र अधिक नवीन देख्न सक्नुहुन्छ।
मँ यो कहाँ बाट डाउनलोड गर्छु ????
पोष्टको सुरुवातमा वर्षाबाट देखा परेको पृष्ठभूमि के हो? यो भनिन्छ?
Un जी अनरेन्ट्रिसेक्टर आईओएस to मा अपग्रेड गरिएको छ प्रतिबन्धित 3G जी (साइडिया) को लागि
पहेंलो ज्याकेट, एक आईफोन केस जुन स्तब्ध हुन्छ